Tag: Nchịkọta ngwa nyocha | Martech Zone
Kpido: nyocha gbasara ngwa mkpanaaka
Na-eti mkpu: Kachasị Mma Mobile App Development Platform
Nke a bụ otu n'ime isiokwu ndị ahụ enwere m ezigbo ịhụnanya siri ike n'ihe gbasara ndị ahịa m. Ngwa ngwa ngwa nwere ike ịbụ otu n'ime atụmatụ ndị ahụ na-aga n'ihu ịnwe ụgwọ kachasị elu na nkwụghachi ala kachasị na ntinye ego mgbe emechara nke ọma. Ma mgbe emechara nke ọma, ọ nwere nnabata dị elu na njikọ aka. Kwa ụbọchị, a na-ebugo ngwa ọdịnala 100 na ahịa, nke pasent 35 na-emetụta ahịa.
Emere ntinye ka ndị ọchụnta ego wee nwee ike ime mkpọsa ngwa mkpanaka na-enweghị mkpa maka mmepe ngwa mkpanaka. Ikpo okwu nwere ọtụtụ ntinye aka nke nwere ike itinye ngwa ngwa, emelite, ma jikwaa ya. Ewubere ọtụtụ atụmatụ maka ndị na-ere ahịa na ndị otu ngwaahịa iji hazie njem onye ọrụ, na-ebute oge ọ bụla, mụbaa njikọ aka, ma tụọ ma nyochaa arụmọrụ nke ngwa ahụ. Ngwa ndị a bụ ụmụ amaala iOS na gam akporo. The atụmatụ na-agbajikwa
Na-efegharị: Nchịkọta Oge Ntinye maka Ngwa Ngwa
Y’oburu n’inwe ngwa mkpanaka biputara, ihe nlere anya na aghaghi inwe. Ọ bụ Ngwa Ngwa Mobile dị ka nchịkọta Google bụ weebụsaịtị. Fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-ahụ maka ikpo okwu na-arụ ọrụ iji jikọta Flurry n'ime ngwọta ha n'ihi na ọ dịghị mkpa maka mgbakwunye mgbakwunye ka ị na-eji nyiwe ndị ọzọ. Bluebridge, onye na-akwado ekwentị anyị mebere ngwa mkpanaka anyị, yana ha na Flurry. Ma ọ bụrụ na ị mepụtara nchịkọta ngwa, Flurry na-enye gị ohere
MobileAppTracking: SDK maka mkpịsị aka ekwentị
Fraịde, Ọgọstụ 22, 2014 Saturday, January 14, 2017 Douglas Karr
MobileAppTracking na-enye SDK (Android ma ọ bụ iOS) iji jikọta mkpesa na ntanetị mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ onye mbipụta akwụkwọ na usoro mmepe gị. Ozugbo SDK gbakwunyere, ị nwere ike ịmegharị ihe omume sitere n'aka onye ọ bụla ọzọ. MobileAppTracking anaghị adabere na UDID dị ka usoro njirimara - ha na-akwado ọtụtụ ụzọ aha njirimara ndị kwekọrọ na iwu ụlọ ahịa ngwa. Sochie mobile ngwa installs na onye ọrụ njikọ aka azụ gị mobile mgbasa ozi
Distimo na-enye ikpo okwu nyocha ngwa ngwa n'efu maka ndị mmepe yana data ahịa ngwa. Ngwurugwu Distimo na-eme ka ndị mmepe soro ngwa ngwa ngwa mkpanaka, ntinye ngwa, yana ntụgharị ngwa maka mkpọsa na ngwa nke aka ha n'ofe ọtụtụ ngwa ngwa. Distimo na-enye nyocha ngwa ngwa ha n'efu, na-enye ha ohere ichikota ọtụtụ data na nkwalite dị mma na ngwọta ha akwụ ụgwọ, AppIQ. Distimo si AppIQ na-enye data asọmpi kwa ụbọchị maka ngwa gafere ọtụtụ ahịa ahịa ekwentị.
Njupụta bụ usoro nyocha ngwa ngwa dị mfe maka ndị mmepe iji jikọta. Ikpo okwu a gụnyere nyocha oge, mmekọrịta dashboard, njigide site na ndị otu, ngwa ngwa ngwa ngwa, akụkọ ntolite onye ọrụ na mbupụ data. Ọkachamara, azụmaahịa na atụmatụ ụlọ ọrụ na-agụnye nyocha ego ha ga enweta, nkewa onye ọrụ, ajụjụ a na-ahụkarị, nyocha gbasara njiri mara mgbasa ozi, nnweta nchekwa data na ntinye ọnụ nke ọma dabere na ngwugwu ị debanyere aha. Ijikọta na njupụta chọrọ naanị otu akara nke koodu na ngwa gị.
Tuesday, June 11, 2013 Sunday, June 28, 2015 Douglas Karr
Ndi obodo na enye oru nyocha nke ngwa di nma maka iPhone, iPad, gam akporo, Blackberry, Windows Phone 7 na HTML5 ngwa. Ihe ngwọta ha nke igwe ojii na-enye usoro ikpo okwu mechiri emechi nke na-enyere ndị ahịa aka kewaa ndị ọrụ dabere na ọrụ ngwa ngwa n'ezie ma nyefee mkpọsa ahịa ebumnuche na amụma. Analytics Mobile App Analytics gụnyere: Dashboards na-enye ndị ahịa ohere inyocha akparamàgwà ndị ọrụ dị mkpa, dịka ha na-eme Funnel management na-enye ndị ahịa ohere iji data iji kpalie atụmanya